Zim ready to regain tourism market share - Business Daily News Zimbabwe
Zim ready to regain tourism market share
Zimbabwe is set to participate at Africa's largest travel trade show, Travel Indaba, which starts in Durban, South Africa, tomorrow and ends on Thursday.
"This year the country will participate with a record 32 tourism operators on its national stand.
"The exceptional response is a true reflection that Zimbabwe is open and ready for business," he said in a statement.
"Various Zimbabwean tourism operators have expressed optimism that travel to Zimbabwe will increase as the Government re-engages global markets who have been shunning Zimbabwe for a long time.
"A number of Zimbabwean tour operators have also secured their own exhibition stands at indaba, which will enhance Zimbabwe's participation," he said.
"We have over the years lost substantial amounts of business to the South African market. We must take remedial action without further delay, we need to act swiftly. We are going to South Africa to regain the market share we lost," said Dr Kaseke.
"The level of participation by tourism players from Zimbabwe is very encouraging and I know Zimbabwe is going to make a huge impact at the Travel Indaba this year. I am very happy that even smaller operators are now also seeing that marketing their products at these big travel shows can assist their businesses to grow," he said.
Zimbabwe will hold its "first visit Zimbabwe" roadshow on the sidelines of the main travel conference.
"The decline in arrivals from South Africa, which is the country's major market, is of great concern and calls for urgent attention.
"This has resulted in the need for a 'Visit Zimbabwe' campaign in South Africa," he said.